သင်ခန်းစာ | မာသင်
1946 မှာ Percy Spencer ဆိုတဲ့ အငယ်တန်း အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ဟာ Raytheon Corporation ကုမ္မဏီမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ ကုမ္မဏီရဲ့Project တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ရေဒါ နည်းပညာ ကို ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ သူစားနေတဲ့ ချောကလက်ကို မတော်တဆ အရည်ပျော်အောင် လုပ်မိသွားပါတယ်။ အဲဒီမှာ အများသိတဲ့Microwave Oven ထမင်းဟင်းအပူပေး နွေးတဲ့ မီးဖို ကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
သာမာန်အားဖြင့် စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် … ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ ဝါယာတွေ၊ ဆားကစ်တွေပေါ်ကို ချောကလက်အရည်ပျော်သွားတဲ့မတော်တဆ ဆိုတာ ပြသနာကြီးတစ်ခုပါပဲ။ ကံမကောင်းရင် အလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်သလို အထက်လူကြီးရဲ့ငြိုညင်တာကို ခံရဖို့အသေအချာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် Growth Mindset လို့ခေါ်တဲ့ ပြသနာဖြစ်တိုင်း ဘယ်လိုသင်ခန်းစာမျိုးရလိုက်သလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်မျိုးရှိတဲ့ သူဟာ ပြသနာကို အခွင့်အရေးအဖြစ် အသုံးချကြပါတယ်။
အချို့က ပြသနာကို ကျရှုံးမှု၊ လုပ်ရကိုင်ရခက်မှု လို့မြင်ပြီး
အချို့က ပြသနာဆိုတာ အခွင့်အရေးတစ်ခု လို့မြင်ပြီး အလုပ်အကိုင်လမ်းပွင့်သွားကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်.. ပြသနာတစ်ခု ကြုံတိုင်း မေးခွန်းနှစ်ခု မေးပါ။
၁။ ဘာအခွင့်အရေး ရှိလဲ ?
၂။ ဘာသင်ခန်းစာရလိုက်လဲ ?
မိတ်ဆွေ ရဲ့ဘဝမှာ လဲ ပြသနာများစွာကြုံခဲ့ဖူးမှာပါ။
ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြသနာ နဲ့ဘယ်လို သင်ခန်းစာမျို းတွေ ရခဲ့လိုက်သလဲ ဆိုတာ ကို အများသင်ခန်းစာယူလို့ရအောင် မျှဝေခဲ့ပါလားဗျာ။